Turkiga oo soo badbaadiyey tahriibayaal ay Soomaali ku jiraan
By WARIYAHA ANKARA , GAROWE ONLINE
Ciidamadda ilaalada Gariiga ayaa lagu eedeeyay in ay is hortaag ku sameeyeen soo galootiga.
ANKARA, Turkey – Ciidamadda ilaaladda xeebaha Turkiga ayaa Sabtida maanta ah soo badbaadiyey 26 soo-galooti ah kuwaas oo doonayay in ay dhanka badda ka galaan qaaradda Yurub, sidda ay qortay warbaahinta gudaha.
Saxaafadda maxaliga ah ee waddanka Turkiga ayaa waxay warisay dowladda Greek ay muhaajiriintaas dib u soo celisay badda.
Magan-galyadoonayaasha oo ka baxay xeebta Turkiga ee Aegean ayaa damacsanaa in ay gaaraan Jaziiradda Lesbos ee dalka Gariiga.
Kooxdan lasoo badbaadiyey oo ka soo kala jeeda dalalka Soomaaliya, Afghanistan iyo Bartamaha Afrika, sidda ku xusan warbixinta, waxaa qabtay ciidamadda ilaalada xeebaha Gariiga oo dib ugu soo celiyey biyaha Turkiga.
"Kadib markii ay soo badbaadiyeen, mas'uuliyiinta Turkiga ayaa siiyey cunto iyo dhar," ayay wakaaladda wararka Anadolu ku warantay. Laba caruur ah iyo shan dumar ah ayaa kamid ah dadkaan lasoo badbaadiyey.
Anadolu ayaa intaas ku dartay in xaalada caafimaad ee dadkaan ay tahay mid wanaagsan, balse ma shaacin talaabada xigta ee laga qaadayo.
Turkiga waa mid kamid ah marinada ugu badan oo ay adeegsadaan tahriibayaasha doonaya in ay gaaraan Yurub tan iyo markii uu qarxay dagaalka sokeeye ee Suuriya. Hadda wuxuu qaabilay ku dhowaad 4 milyan oo qaxooti ah.
Warbixinta ayaa ku saabsan socdaalkii Gudoomiyaha ee Jubbaland iyo Turkiga.
Beesha caalamka oo war kasoo saarey weerarkii Muqdisho, baaqna u diray DF
Soomaliya 22.12.2018. 23:49
Safiirka Turkiga oo kulamo siyaasadeed kawada Muqdisho [XOG]
Soomaliya 27.06.2018. 17:21
Madasha Xisbiyada Qaran oo war kasoo saartay xaaladda Soomaaliya
Soomaliya 05.03.2020. 12:36
Agabkii ka hortagga Covid-19 ee loogu deeqay DF oo laga ganacsanayo 04.06.2020. 19:05